बाँगेचौर खेलमैदानमा प्रथम सनराईज खुला क्रिकेट प्रतियोगिता शुरु ! – ebaglung.com
बाँगेचौर खेलमैदानमा प्रथम सनराईज खुला क्रिकेट प्रतियोगिता शुरु !
२०७६ जेष्ठ २१, मंगलवार १८:३७	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
सुभाष गौतम, बागलुङ २०७६ जेठ २१ । जिल्लामा क्रियाशिल सनराईज क्रिकेट क्लब बागलुङको आयोजनामा बाङ्गेचोर खेलमैदानमा आज देखि खुला क्रिकेट प्रतियोगिता शुरु भएको छ ।
खुला क्रिकेट प्रतियोगिताको उद्घाटन पछि बोल्दै सनराईज आवसीय माध्यामिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष निरवहादुर क्षेत्रीले विद्यार्थीलाई पढाईको संगै खेल क्षेत्रमा समेत अगाडि बढाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
जिल्ला क्रिकेट विकास समितिका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद आचार्य, जिल्ला क्रिकेट विकास समितिका सचिव फरिन्द्र खड्का, पत्रकार खेमराज गौतम सुवास, सनराईज आवसीय माध्यामिक विद्यालयका शिक्षक निमराज कंडेल लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए ।
खुल्ला क्रिकेट प्रतियोगितामा १२ टिमको सहभागी रहने सनराईज क्रिकेट क्लबले जनाएको छ । उद्घाटन कार्यक्रम सनराईज क्रिकेट क्लबका उपाध्यक्ष प्रेम विश्वकर्माको अध्यक्षता क्लवका सदस्य सविन गौचनको स्वागत तथा प्रिन्सिपल चन्द् बहादुर क्षेत्रीको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो । उद्घाटन खेल पञ्चकोट क्रिकेट क्लव र सनराईज क्रिकेट क्लव वीच भएको थियो ।
लोपोन्मुख घाटु नाँचलाई जोगाई राख्न युवा पुस्ताले सिको गर्नु जरुरी !
पोखरेली र सुर्खेतबासिको मन जितेको नाटक घेरो अब काठमाण्डौँमा !